Soo dejisan Norton 2015 22.5.4.24 Security Premium... – Vessoft
Soo dejisan Norton
Ilaalinta aasaasiga ah waxaa bixiya-adda this xannibi karaa waxqabad kasta oo viral iyo hortago in cabaar ah software basaas nidaamka. Waxa ay u ogolaataa user ay u shaqeeyaan iyada oo aan wax faragelin ah iyo macluumaadka bogga internetka la wadaagto heerka ugu badan oo ah ammaanka. Muuqaalka caan ku adda tani waa in uu leeyahay 5 heer oo ah ilaalinta u oggolaanaysa in ka saar fayrusyada fiican oo degdeg ah. Intaa waxaa dheer, Norton ka hortagtaa xatooyo macluumaadka shakhsiyeed iyo passwords halka browsing goobood oo kala duwan.
Technology SOONAARKA bixisaa wareega la socodka saacad nidaamka iyo ka saaraysaa hanjabaad deg deg ah
Waxaa ka saaraysaa xitaa kuwa fayrasyada in antiviruses kale skip to markii dhowr
Ilaalinta Technology ku salaysan yahay falanqaynta ee sumcadda of sites qaarkood
Leyahy sites phishing
Norton Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... AdwCleaner 6.030